१२ बैशाख २०७५ |
यस कारण हुन्छ थकान महसुस
तपाईलाई बारम्बार थकान लाग्छ ? जतिखेर पनि थाक्नुका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । त्यस मध्ये एक पानी जीवनका लागि नभई नहुने तत्व हो । शरीर सुख्खा भयो भने जतिखेर पनि थकित महसुस गरिन्छ । सुुख्खा हुँदा शरीरमा रगतको मात्रा कम हुने र अक्सिजन र अन्य अत्यावश्यक पोषण तत्व प्रवाह हुने गतिमा पनि सुस्तता आउछ ।
आइरनको कमीले थकित मात्र होइन दिक्क बनाउँछ । शरीरमा न्यून आइरनको अर्थ मांसपेशी र कोषमा न्यून अक्सिजनको प्रवाह हो । आइरनको कमीले रक्तअल्पता पनि हुन्छ । अन्डा, हरियो सागसब्जी, बदाम लगायतका खानेकुरा खाएर शरीरमा आइरनको मात्रा सन्तुलित राख्नुहोस् । मेटाबोलिजमलाई सशक्त बनाउन पनि ब्रेकफास्टको उत्तिकै महत्व हुन्छ । ब्रेकफास्ट नखाँदा पनि दिउँसोभर थाक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन र फयाटमिश्रित पूर्णब्रेकफास्ट लिएर शरीरलाई फूर्तिलो बनाउनुहोस् ।
तपाईंले नियमित व्यायाम गर्नुभएको छ भने बिहान उठ्दा पनि फूर्तिलो हुनुहुन्छ । व्यायामले खुशी बनाउने हर्मोन निष्कासन गर्छ, यसबाट शरीर उर्जाशिल भइराख्छ र दिनभर खुशी बनाउँछ । तपाईले निरन्तर काम गर्दागर्दै काम गर्ने कार्यालयको भर्याङ चढ्न गा¥हो त भएको छैन ? काममा अत्यधिक समय दिँदा स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण पक्ष ओझेलमा त परेका छैनन ? निश्चय नै कामको लोडले तपाईलाई तनाव उत्पन्न हुन्छ । विज्ञहरुका अनुसार तनाव स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्ने एउटा मन्द विष हो ।
दिनभरको थकान मार्न बेलुका खाना खाएपछि मदिरा पिउँदा केही क्षण आनन्दा आउला तर यसले तपाईको सुत्ने तािलकामा असर गरेको हुन्छ । मदिराको ह्याङ भोलिपल्ट अबेलासम्म रहिरहने हुनाले तपाईलाई शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ बनाउछ । तपाईं जतिखेर पनि अशान्त हुने, फोन मात्र चलाउने र मोइबाइलका मेसज हेरेर महत्वपूर्ण समय फाल्नु त भएको छैन? धेरै समय फोन, ट्याब्लेट, र ल्यापटपमा बस्दा पनि मानसिक रुपमा थकान हुन्छ । र कफीले निन्द्रालाई रोकिदिन्छ र एकै रातमा पनि आफ्ना महत्वपूर्ण काम फत्ते गर्न सक्नुहुन्छ । तर नियमित कफीको लत छ भने यसले सुत्ने तालिकामा नराम्रो प्रभाव पार्छ ।
प्रकाशित मिति १२ बैशाख २०७५, बुधबार १४:५६